Webiga Nile: Wadahadaladii seddex geesoodka ahaa oo dib u billowday - Tilmaan Media
Webiga Nile: Wadahadaladii seddex geesoodka ahaa oo dib u billowday
Wadahadalla u dhaxeeya dalalka Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa dib u bilawday. Wadahaladaan ayaa looga gol leeyahay sidii isfaham looga gaari lahaa biyo xireenka Itoobiya ka dhisayso wabiga Niilka.
Dhankiisa Wasiirka biyaha iyo waraabka dalka Masar ayaa sheegay in wadaxaajoodkii seddex geesoodka ahaa ay Jimcihii shalay gelinkii dambe dib u billowdeen si ay dalalka isula meel dhigaan waxyaabaha la isku mari lahaa.
Dalka Itoobiya oo masar kala dhaxayso khilaaf ku aadan wabiga Niil ayaa haatan waxaa ka taagan qulqulatooyin siyaasadeed. Waxaan lagaran karin saamaynta ay qulqulatooyinkaan ku yeelan karaan arrimaha la xiriira khilaafka wabiga Niil.
Shan qof oo ku dhintay qarax ka dhacay duleedka Baydhabo